15ka Magaalo Ee Ugu Qiimaha Badan Aduunka Oo Lagu Noolaan Karo | 2022
Bogga ugu weyn 15 Magaalooyinka Ugu Qiimaha Badan Aduunka Oo Lagu Noolaan Karo | 2022
15 Magaalooyinka Ugu Qiimaha Badan Aduunka Oo Lagu Noolaan Karo | 2022
Dunidu waxay leedahay arimo. Arrimaha aan la dafiri karin. Baadhitaannada Insider Business ee 5tii sano ee la soo dhaafay waxay dhammaantood lahaayeen badbaado, ammaan, iyo fayoobi mid ka mid ah tobanka arrimood ee ugu halista badan adduunka. Tani waxay tusinaysaa in qiimaha maciishada ee go'aamiya magaalooyinka la awoodi karo ee adduunka ay tahay arrin halis ah.
Mararka qaarkood, kaliya waxaad rabtaa inaad dhadhamiso sida ay noloshu tahay meelaha kale, ogaanshaha meelaha la awoodi karo waxay noqon kartaa nafis aad u weyn. Si loo bixiyo fahamka waxa magaalooyinka la awoodi karo ay ku yaalaan aduunka oo dhan, waxay siisay magaalooyinka sababtoo ah qiimaha nolosha.
Maqaalkani waxa uu eegayaa 15-ka magaalo ee ugu jaban ee ugu jaban adduunka si loogu noolaado. Waxa ay ballan qaadaysaa in ay noqon doonto mid xiiso leh.
Waa maxay magaalo la awoodi karo?
Waa maxay macnaha nolosha?
Kala duwanaansho kasta?
15ka magaalo ee ugu qiimaha jaban adduunka si loogu noolaado
#15 - Thessaloniki (Giriiga)
#14 - Magaalada Panama (Panama)
#13 - Tallinn (Estonia)
#12 - Oporto (Portugal)
#11 - Riga (Latvia)
#10 - Seville (Spain)
#9 - Bangkok (Thailand)
#8 - Beijing (Shiinaha)
#7 - Montevideo (Uruguay)
#6 - Murcia (Spain)
#5 - Zagreb (Croatia)
#4 - Vilnius (Lithuania)
#3 - San Jose, Costa Rica (Costa Rica)
#2 - Bratislava (Slovakia)
#1 - Port Louis (Mauritius)
Magaalo la awoodi karo waa tan qiimaha nolosha, hab -nololeedka, iyo nabadgelyada celceliska deganaha la tixgeliyo. Magaalo la awoodi karo waa midda cuntada, nolosha, madadaalada, iyo gaadiidku ay aad ugu fududahay in la helo.
Waxaa jira magaalooyin badan oo la awoodi karo adduunka, oo lid ku ah waxa dad badani rumeysan karaan, qaar ka mid ah magaalooyinka ay rumeysan yihiin inay qaali yihiin ama raqiis yihiin runtii waa la awoodi karaa.
Taas micnaheedu waa waxyaalo badan dad badan, badanaana, ma khaldana. Halka aan dooran karno inaan raacno Qeexitaanka qaamuuska Cambridge kaas oo ku qeexaya “xaddiga lacagta ay dadku u baahan yihiin inay ku bixiyaan si ay u iibsadaan badeecadaha ama adeegyada aasaasiga ah sida cuntada, dharka iyo meel ay ku noolaadaan”, ama qeexidda Mercer oo ku darsata gaadiid iyo madadaalo taas, waa siyaabo badan intii aan ahayn, shakhsi ahaan. Tan waxaa si fiican loogu fahmaa “dhulka”.
Haa, dhab ahaantii. Raadinta magaalooyinka ugu raqiisan adduunka ee lagu noolaan karo ma aysan dhaafin qaarad kasta ama gobol kasta raadinta. Meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan liiskan samayn, laakiin dhammaantood waa la tixgeliyey.
XIDHIIDHKA: Siyaabaha ugu raqiisan ee sanduuqyada loogu raro gobol kale sannadka 2022
Magaaladan oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Giriigga oo ay ku nool yihiin ilaa hal milyan oo qof ayaa ah magaalada 15-aad ee ugu jaban ee lagu noolaan karo. soo jiidashada dalxiiska ee Greece. Magaaladu waxay bixisaa cunto la awoodi karo, guryo, iyo daryeel shaqsiyeed. Qiimaha nolosha hal qof ee Thessaloniki waxaa lagu qiyaasay ilaa 1,009 euro.
Caasimaddan iyo magaalada ugu weyn ee Panama oo hoy u ah dadka ku nool magaalooyinka in ka badan 1.5 milyan oo qof ayaa ah magaalada 14 -aad ee ugu jaban. Magaaladan oo burburkeedii hore laga soo bilaabo 1671 noqday dalxiis dalxiis waxay ku siisaa cuntada qadada ee aasaasiga ah oo la awoodi karo 15 Balboa. Qiimaha nolosha hal qof ee magaalada Panama waa 1,653 Balboa.
Tallinn, magaalada ugu dadka badan Estonia sidoo kale waa mid la awoodi karo. Magaaladu waxay bixisaa qado aasaasi ah € 9 iyo kirada billaha ah ee hoyga alaabta lagu diyaariyo ee aagga caadiga ah € 697. Tallinn oo ah xarunta dhaqaalaha, warshadaha, iyo dhaqanka ee Estonia waxaa ku nool in ka yar 500, 000 oo qof. Qiimaha nolosha hal qof ee Tallinn waa 1,425 euro.
Magaaladan oo ay ku noolyihiin in ka yar 300,000 oo qof marka la barbardhigo magaaladeeda weyn oo ay ku nool yihiin 1.7 milyan oo qof, waa magaaladeena 12aad ee ugu jaban. Oporto ama Porto waxay hoy u tahay Taallada Qaranka ee Boortaqiiska iyo Goobta Dhaxalka Adduunka ee UNESCO waxay bixisaa cunto la awoodi karo, guryo, iyo gaadiid. Qiimaha nolosha hal qof ee Oporto waa 1,314 euro.
Magaaladan oo qiimaheeda nololeed uu ka jaban yahay 62% magaalooyinka adduunka, waa magaalada 11aad ee ugu jaban. Riga gudaheeda, qadada aasaasiga ah waxay ku kacaysaa € 8, kirada billaha ah ee hoyga alaabta ee aagga caadiga ah waxay ku socotaa € 508, tigidhka billaha ah ee gaadiidka dadweynaha wuxuu marayaa € 47. Magaaladan caasimadda ah ee Latvia oo ay ku nool yihiin saddex meelood meel tirada guud ee dadka ku nool 2 milyan oo qof ayaa leh dhaqan hodan ah. Qiimaha nolosha hal qof ee Riga waa 1,132 euro.
Seville, oo ah magaalada labaad ee ugu raqiisan Galbeedka Yurub, waa magaaladeena 10 -aad ee ugu jaban. Seville waa magaalada afaraad ee ugu weyn Spain iyo degmada 30aad ee ugu dadka badan Midowga Yurub. Magaaladan oo ay ku yaalliin saddex goobood oo dhaxalgal ah oo UNESCO leedahay waa mid aad loo awoodi karo. Qiimaha nolosha hal qof ee Seville waa 1,216 euro.
XIDHIIDHKA: 10-ka Magaalo ee ugu Fiican ee Kulliyadaha ee laga fariisto
Bangkok, caasimada iyo magaalada ugu dadka badan Thailand waa magaaladeena 9aad ee ugu jaban. Qiimaha nolosha Bangkok wuu ka jaban yahay 63% magaalooyinka adduunka. Magaalada waxaa ku nool dad ku dhow 10.5 milyan oo qof waxayna ku nooshahay qiyaastii 15.3% dadka dalka. Cuntada aasaasiga ah ee Bangkok waxay ku kacdaa qiyaastii 220 baht. Qiimaha nolosha hal qof ee Bangkok waa 50,906 baht.
Beijing, waa magaalo ku taal Waqooyiga Shiinaha waana caasimadda Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha, waa magaalada ugu dadka badan adduunka. Beijing, oo dhaqaalaheedu yahay kan ugu horumarsan Shiinaha waana magaalada labaad ee ugu weyn Shiinaha marka laga reebo Shanghai, waa magaalada 8-aad ee ugu jaban adduunka ee lagu noolaan karo. Qiimaha nolosha hal qof ee Beijing waxaa lagu qiyaasaa qiyaastii 13,162 Yuan.
Magaaladan oo ay ku nool yihiin ilaa 1.3 milyan oo qof, taasoo ah qiyaastii saddex meelood meel tirada guud ee dadka dalka, waa magaalada 7 -aad ee ugu jaban adduunka ee lagu noolaan karo. Montevideo, oo ah caasimadda iyo magaalada ugu weyn Uruguay, waxaana lagu tilmaamaa meel firfircoon oo dhaqameed hodan ah, waa meel aad u jaban oo lagu noolaan karo. Kharashyada billaha ah ee hal qof Montevideo waxaa lagu qiyaasaa ilaa 52, 706 peso.
Magaaladan oo caan ku ah dhaqanka beeraha ee soo jireenka ah ayaa ah magaalada 6-aad ee ugu jaban adduunka ee lagu noolaan karo. Kharashyada billaha ah ee hal qof oo ku nool Murcia waxaa lagu qiyaasaa qiyaastii 1 euro.
Zagreb, caasimadda Croatia oo ku taal qaybta waqooyi-galbeed ee dalka, waa magaalada 5-aad ee ugu jaban adduunka ee lagu noolaan karo. Caasimaddan cajiibka ah oo waayo-aragnimo kala duwan siisay dhammaan kuwa soo booqday waa mid aad u jaban. Qiimaha nolosha hal qof ee magaaladan cagaaran, oo aad loo soo dhaweeyo, ayaa lagu qiyaasay ilaa 8,624 Kuna.
Vilnius, Lithuania, waa magaalo ka tarjumeysa waayihii iyo dhaqammo badan. Waa magaalo xusuus aan la ilaawi karin ku reebtay maskaxda martida. Magaaladan caasimadda ah ee Lithuania iyo magaalada ugu weyn oo ay ku nool yihiin dad ka yar 600,000 waa magaalo aad u jaban oo lagu noolaan karo. Kharashyada billaha ah ee hal qof oo ku nool Vilnius waxaa lagu qiyaasaa qiyaastii 1, 144 euro.
XIDHIIDHKA: Qorshaynta Maaliyadeed ee Hawlgabka: Dulmar iyo Sida ay u Shaqeyso
San Jose, oo ah caasimada iyo magaalada ugu weyn Costa Rica waxaa ku nool ilaa 330,000 oo qof. Magaaladu waxay caan ku tahay nolol tayo sare leh, nabadgelyo, iyo heer sare oo caalamiyeyn. Kharashyada billaha ah ee hal qof oo ku nool San Jose, Costa Rica waxaa lagu qiyaasaa ilaa 728,388 gumeysi.
Bratislava, oo qiimaheeda nololeed ka raqiisan yahay ku noolaanshaha 66% magaalooyinka adduunka, waa caasimadda iyo magaalada ugu weyn Slovakia. Magaaladan qadiimiga ah oo ay saamayn ku yeesheen dadyowga umaddo iyo diimo badan waxay hoy u tahay ilaa 430,000 oo qof.
Qiimaha nolosha hal qof ee magaaladan oo lagu qiimeeyay gobolka saddexaad ee ugu qanisan EU -da GDP ayaa lagu qiyaasay qiyaastii 1,280 euro.
Port Louis, caasimadda Mauritius, waa magaalo leh taariikh aad u qani ah, waana magaalada ugu qiimaha badan adduunka in lagu noolaado, waa udub dhexaadka dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee gumeysigii hore ee Faransiiska.
Port Louis waxay hoy u tahay ilaa 200,000 oo qof. Qiimaha hal qof oo ku nool Port Louis ayaa lagu qiyaasay ilaa 46,708 rupees. Waa meel u qalanta xayaysiinta ku xeeran oo dhan.
Dadka akhriya nuxurkaan, waxay ku dambeeyaan akhriska Noqo martida Airbnb oo Samee Lacag badan Ka hubi Out
Liiskan meelaha ugu raqiisan adduunka ee lagu noolaado ma aha mid dhammaystiran. Waxyaalaha xiisaha leh ee ku saabsan meelahan ayaa loo qoray si loogu noqdo asalka waxyaabaha qaarkood la sheegay. Haddii aad rabtay inaad booqato mid ka mid ah meelahan, markaa tani waa inay u ekaataa sida ku -noolaanshaha goobahan ay u eg tahay celceliska degganaha.
Raasamaalka Shaqsiyeed ma ammaan yahay & Ammaan yahay 2022 -ka? Hagaha Khabiirka ah ee maalka
20ka hantiile ee ugu hantida badan dunida
Caasimad Shakhsiyeed iyo Quicken: Halkan waxaa ah dookhayga ku saabsan Dhismaha Hantida
17 Goobaha Arooska La Iibin Karo oo aadan ku fikirin
20 Shaqooyin Oo Bixiya $40 Saacadii Ilaa Aad Ka Daasho
Dillaaliyeyaasha ugu Wanaagsan ee Ganacsiga ee Ganacsiga 2022
Sida Looga Hawlgaliyo 50 -ka Milyaneer ahaan! Riyooyinka Hawlgabka
Fekerka ka fariisashada waa cabsi sida kelmadda u dhawaaqo. Cabsidan ayaa aad u adag marka aad...
401k vs 403b: Waa maxay Farqiga u dhexeeya 401k iyo 403b sanadka 2022?
Ma jiro wax ka cabsi badan inaadan haysan wax aad tusto wakhtiyadii aad ku jirtay adeeg firfircoon. Tani…
401K VS IRA: Waa 401k waa IRA | Isbarbardhig Buuxda Iyo Wax La Mid Ah
Xisaabaadka hawlgabka shaqsiyeed (IRAs) iyo 401 (k) qorshooyinka ayaa ah siyaabaha ugu badan ee lagu badbaadiyo laguna maalgeliyo hawlgabka.…
10-ka Magaalo ee ugu Fiican ee Kulliyadaha ee laga fariisto
Iyada oo leh astaamo kala duwan oo cajiib ah oo ay magaalooyinka kulleejyadu bixiyaan dadka waayeelka ah, la yaab maaha in magaalooyinka kulliyadaha…
Meelaha ugu Fiican ee aad isaga fariisan karto California 2022
Magaalooyin badan oo California ah, helitaanka magaalada ugu habboon hawlgabka ka dib waxay noqon kartaa jahawareer…
Qorshaynta Maaliyadeed ee Hawlgabka: Dulmar iyo Sida ay u Shaqeyso
Waxaad u shaqeysay si adag oo kugu filan si aad u abuurto nolol ay ka buuxaan riyooyin, guulo, iyo farxad naftaada iyo…